Zarganar of Burma & Burmese People: May 2008
Posted by MoeMaKha at 6:32 PM 1 comments
Relief Works at Shwe Bo, Kan Zu, Htain Chaung, Kyun Nyo, EYar, News Photos
သွားရောက်ခဲ့သော ရွာများ - ရွှေဘို၊ ကံစု၊ ထိန်ချောင်း၊ ကျွန်းညို၊ ဧရာ
ပင်လယ်ဖက်က လှည့်ဝင်ရသော ဒေသမြင်ကွင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်ဆယ် စောင့်ရှောက်ရေးတွေအပြင် စိုက်ပျိုးရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက် အကူအညီများပေးခြင်း၊ ဆေးကုသခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ လုပ်ကြရသည်ဟု သိရသည်။ စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်များကိုပါ အကူအညီတောင်း ဆောင်ရွက်ကြရသည်ဟု ဆိုပါသည်။ (ဇာဂနာနှင့် အနုပညာရှင်များထံက လာတဲ့စာ)
ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ပြည်သူများဖြင့် မြန်မာပြည်ကို တည်ဆောက်နေပြီ ဖြစ်ရာ - ပြည်သူသာ အမိ၊ ပြည်သူသာ အဖ ဟု မကြွေးကြော်ဘဲ၊ တပ်မတော်သာ အမိ၊ တပ်မတော်သာ အဖ ဟူသော တပ်မတော်အစိုးရ ကို မြန်မာတို့က ဘေးမဲ့ပဲ ပေးထားလေသလား၊ တပ်မတော်ကြီးကပဲ ပြည်သူ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လက်ပိုက်ပဲ ကြည့်နေလေသလား ( စာဖတ်သူတွေ ရေးတဲ့စာ)
Posted by MoeMaKha at 12:05 PM0comments
မေ ၂၇၊ ၂၀၀၈
Posted by MoeMaKha at 3:20 PM2comments
Together with the Burmese volunteers groups and their friends, The artists and the actors are taking bus and boat to help the Burmese Nagis Victims in the delta area.
Posted by MoeMaKha at 10:25 AM0comments
လေဘေးကယ်ဆယ်ရေး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးဟု ကြား
Labels: Relief News
မေ ၂၂၊ ၂၀၀၈
တောင်ဒဂုံတွင် နေထိုင်ကြသူ ကိုလေးလွင်၊ မချိူ၊ ကိုထွန်းထွန်းဇော်၊ ကိုခင်ထွန်း၊ မဥမ္မာ၊ မ ပပတို့ကို စစ်အစိုးရ လုံခြုံရေးအဖွဲ့က ယနေ့မနက် ၃ နာရီတွင် ဖမ်းဆီးသွားကြောင်းသိရသည်။ ကိုခင်ထွန်းမှာ အဲန်အယ်ဒီ မုန်တိုင်းဒဏ် ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ကိုဇာဂနာ၏ အဆိုအရ သူတို့အားလုံးသည် ဒဂုံဒေသဖက် လေဘေးကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အလှူကိစ္စများတွက် စေတနာရှင်လုပ်အားပေးများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လှိုင်သာယာမြို့နယ် နအဖအဖွဲ့ကမူ ဒုက္ခသည် ပြည်သူများကို ကူညီလိုပါက အာဏာပိုင်များကတဆင့်ကူညီရန်၊ အလှူခံနေသူ ဒုက္ခသည်များကြောင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပတွင် အရှက်မရကြရေး ကာကွယ်ရန်၊ ယခုအချိန်တွင် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအလုပ်များ ပြီးစီးပြီးဖြစ်သဖြင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး ပြုကြရမည့်အချိန်ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် သတိပေးထုတ်ပြန်ထားသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
Posted by MoeMaKha at 11:03 AM0comments
Labels: Relief Works
မေ ၂၃၊ ၂၀၀၈
Still at 20th May 2008, in Delta area, bodies were found still floating
Burmese Film villains in movies but outside, Heroes at heart helping Burmese
Burmese Refugees showing how much they thanked the volunteers and relief helps
(Before 2nd May 2008, they had their own home, family and friends but after the storm, they were left with nothing but at the charity of concerned Burmese citizens and the World ... Please do not wait ... Save Lives and Save Burma ...)
Posted by MoeMaKha at 11:02 AM0comments
Posted by MoeMaKha at 11:00 AM0comments
Posted by MoeMaKha at 5:04 PM0comments
"ရန်ကုန်မြစ်ကြီး ညှီပြီင်္း အနံအသက်တွေ ထွက်နေပါပြီ"
မေ ၁၁၊ ၂၀၀၈
ရုပ်ရှင်ပညာရှင်၊ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ စာနယ်ဇင်းပညာသည်တွေ စုစည်းလို့ လေဘေးဒုက္ခသည်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး အကူအညီပေးဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်း ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းလို့ အဖွဲ့ချုပ်က လူကြီး၊ လူငယ်တွေက ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စစ်အစိုးရက တပ်မတော်အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည်အင်အားရှိမယ်။ ဒါကြောင့် အခု အရင်ဆုံး အခြေဥပဒေကို အရင်ဆုံး ၀ိုင်းအားပေးကြလို့ ဆိုနေတာကြောင့် မုန်တိုင်းသင့်ထားတဲ့ အလောင်းတွေ၊ လူနာတွေနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အားတွေ မပေးနိုင်သေးကြောင်း သူ့အလုပ်တွေနဲ့ သက်သေပြလျက်ရှိပါတယ်။
လမ်းမှာ အပြေးအလွှားသွားနေတဲ့ ပြည်သူ့မိတ်ဆွေ ကိုဇာဂနာနဲ့ မိုးမခတို့ စကားလက်ဆုံ တခဏတာ ပြောဖြစ်ခဲ့တာလေးကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
မေး - အလုပ်တွေ များနေပါလား။ အပြေးအလွှားတွေချည်း တွေ့နေရတယ်။
ဖြေ - ဟုတ်တယ်။ အခု ဆေးတွေ၊ အစားအသောက်တွေ လိုက် အလှူခံနေတာ။ အ၀တ်အစားတွေ ၂ သောင်းလောက် စင်္ကာပူက ရောက်တယ်။ အခု ကိုကျော်သူတို့ လှည့်ဝေနေပြီ။
မေး - အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိသလဲဗျာ။
ဖြေ - ရန်ကုန်မြစ်ကြီး တခုလုံး ညှီနေပြီဗျာ။ ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာလည်း အနံအသက်တွေ မကောင်းတော့ဘူး။ နယ်တွေကို မပြောနဲ့အုံး။ ကလေးတွေ ဆေးရုံတွေမှာ၊ ဆေးခန်းတွေမှာ။ ၀မ်းပျက်တယ်။ ၀မ်းလျှောတယ်။ အနာတွေလည်း ပေါက်တယ်။ ဘာအနာလေးတွေမှန်းတောင် မသိဘူး။
မေး - ဘာတွေ လိုနေသလဲ။ ဘာတွေ ရှိပြီလဲ။
ဖြေ - အကုန်ပဲ။ လိုတာ။ ဘာမှ မရှိဘူး။ လှိုင်သာယာ၊ ကွမ်းခြံကုန်း၊ တောင်ဒဂုံ … ဟာ … နေရာ အနှံ့ပါပဲ။ ဆန်က အရေးကြီးတယ်။ ဆန်ထုပ်ကလေးတွေ ထုပ်ဝေရတာပေါ့။ ရေသန့်ဆေးပြားတွေ လိုတယ်။ ဆေးတွေ လိုတယ်။ အနာလိမ်းဆေးတွေ။ ၀မ်းပျက်ဆေးတွေ။ ၀မ်းပျက်စေတဲ့ဆေး မဟုတ်ဘူးနော်။ ၀မ်းပျက် ၀မ်းကိုက် ပျောက်ဆေး။
မေး - ဟုတ်ကဲ့။ အကိုတို့လို လူမှုရေးနဲ့ အမျိုးသားရေးမှာ တက်ကြွပြီင်္း အတွေ့အကြုံရှိတဲ့၊ ခံနိုင်ရည်တွေ ရှိတဲ့ ၀ိုင်းတော်သားတွေ၊ မိသားစုတွေ၊ အနုပညာရှင်တွေကို ၀ိုင်းပြီး ၀န်းရံကြဖို့ လုပ်အားဝိုင်းပေးကြဖို့ အရေးကြီးတာပေါ့နော်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ကယ်ဆယ်စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့တွေကိုလည်း လက်တွဲဆောင်ရွက်နေကြပြီပေါ့။
ဖြေ - ဒီအချိန်မှာ အားလုံးက ဒုက္ခသည်တွေချည်းပဲ။ ဒုက္ခနည်းနည်းရောက်တဲ့သူက ဒုက္ခများများရောက်တဲ့သူကို ၀ိုင်းဝန်း ကူညီစောင့်ရှောက်နေရတာ ဖြစ်တယ်။ တမြို့လုံး အနံအသက်မကောင်းတာကနေ အားလုံးဆီ မပျံ့နှံ့ဖို့ လိုတယ်လေ။ အစားအသောက်က အရေးကြီးသလို အခု ကျန်းမာရေးက အရေးပေါ်နေပြီ။ ရေသန့်ဆေး၊ လိမ်းဆေး၊ ဆေးမျိုးစုံတွေ … ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်တွေ … လိုအပ်နေပါတယ်။
မေး - မင်းသား မင်းသမီးတွေကိုလည်း လမ်းပေါ်မှာ တွေ့နေရတယ်။
ဖြေ - ဟုတ်တယ်။ ပြည်သူတွေဟာ သူတို့ ထမင်းရှင်တွေပဲ။ အခု အများကြီး အဖွဲ့လိုက် နယ်တွေကို ဆင်းကြလိမ့်မယ်။ ဆင်းနေပြီ။ ခင်ဗျားတို့ ဓာတ်ပုံတွေ မြင်ရင် ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ တွေ့ကြလိမ့်မယ်။
မေး - နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ၊ မိသားစုတွေ အတွက်လည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဆဲပဲပေါ့
ဖြေ - အမြဲတမ်း ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ စာရေးဆရာတွေ၊ စာနယ်ဇင်းသမားတွေလည်း လက်တွဲပြီး ကူညီနေကြတယ်။ အေးဗျာ … ပေါ်ဦး (ကိုမင်းကိုနိုင်) မျက်စိ ပြခွင့်ရခဲ့တယ်ဗျာ။ ကန်တော်ကြီးမှာ ဆိုပဲ။ အဲဒါလေး သတိရလို့ ထည့်ပြောလိုက်တာ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ထူးတာရှိရင် ပြောမယ်လေ။
မေး - ဟုတ်ကဲ့။ ကျနော်တို့နဲ့ အခုလို အပြေးအလွှားနဲ့ ဖြေကြားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဖြေ - နောက်တွေ့ချင်ရင် လိုက်ရှာပြီးသာ ခေါ်နော်။ ကျနော်တို့မှာ ဘာမှ မရှိဘူး။ မီးမရှိ၊ ဖုံးမရှိ၊ အင်တာနက် မရှိနဲ့။ နို့ဆီခွက်ကို ဟိုဖက် ဒီဖက် နန်းကြိုးဆွဲပြီး ပြောလို့ရရင် အကောင်းသား။
Posted by MoeMaKha at 12:40 PM0comments
မေ ၁၆၊ ၂၀၀၈
ကလေးသူငယ်တွေမှာ ဒီလို အရေပြားအနာတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်
မအူပင်မှာ ငှက်ပျောကြော်နဲ့ အဖွဲ့ကို ဒုက္ခသည် ပြည်သူများကြားမှာ တွေ့ရစဉ်
ပဲခူးမှာ ဇာဂနာ၊ အောင်လွင်နဲ့ အဖွဲ့ အလှူခံနေကြစဉ်
ဒေးဒရဲ၊ ဖျာပုံ၊ ဘိုကလေးတ၀ိုက် ချောင်းလက်တက်လေးတွေက လူတွေ ဘာမှ မရသေးဘူး။ ရွာ ၁၈ ရွာလောက်က ရေထဲမှာ ကျွန်းမျောတွေလို ဖြစ်နေတာ၊ ဟယ်လီကော်ပတာနဲ့မှ ရောက်နိုင်မှာ။ ဝေဠုကျော်က လပွတ္တာ …၊ မအူပင်မှာ ငှက်ပျောကြော်တို့ …၊ ဒေးဒရဲမှာ ဧရာ နဲ့ အဖွဲ့တွေ၊ ဖျာပုံ ဘိုကလေးမှာ ကိုအောင်ခိုင်တို့၊ သတိုးစောတို့ …။ ကျနော်က ရန်ကုန်ကနေ မနက်တိုင်း ပစ္စည်းပို့ …။ ရန်ကုန်ထဲမှာ လှိုင်သာယာ၊ တောင်ဒဂ၊ုံ တိုးကြောင်ကလေးတို့မှာနေ့တိုင်း ဆန်ဝေတယ်၊ ထမင်းကျွေးတယ်။ (ဇာဂနာ ရေးတဲ့စာ)
Posted by MoeMaKha at 12:38 PM0comments